Tilmaamaha Shahaadada ee EC-Council: Guudmarka - Iskuulka ITS Tech
Tilmaamaha Shahaadada ee EC-Council: Guudmarka
Shahaadada EC-Council: Mashruuca Hawl-galka Shahaadada ee EC-Council Certified waxaa la filayaa inuu bixiyo iyo balaadhiyo jirdhiska si uu ula macaamilo lana falceliyo dhacdooyinka amniga kombuyuutarka ee aag domain. Koorsadani waxay muujinaysaa mabaadii 'iyo mabaadi' kala duwan si ay u aqoonsadaan ugana jawaabaan khatarta amaanka ee iminka jira.
Ururrada amniga waxay fuliyaan heerar kala duwan oo lagu dhejiyo - Aqoonsiga xogta, Furaha VoIP, Furaha Wareegga, Furaha Wi-Fi, email-ka encryption, Diiwaangalinta diiwaanka - server / desktop, qaabka isku-xirka codka, sirta server-ka shabakadda, iyo kuwo kale. Had iyo goorba waa mid caqli gal ah in la isticmaalo nabadgelyo dhowr ah si loo hubiyo in mid kasta oo faahfaahin rasmi ah la xidhxidhay oo dhanna la ilaaliyo.
Dhacdooyinka ugu dambeeya ee dillaacyada amniga ayaa iyaga ka dhigtay wax la mid ah - waxay wada lahaayeen midkoodna midkoodna ma jiro ama aan caqli gal ahayn. Waxay keentay in lumiyo tiro badan oo dollar ah oo ay weheliyaan kalsoonida macaamiisha. Ku dar sumcad aad u xun oo waxyeelo u geysta in ay bartaan dhiirigelinta bartamaha. Xaalado yar ayaa ah - Sony PS3, RSA, iPhone, LinkedIn.
Shahaadada ECES waxay la socotaa tartamayaasha iyadoo la isticmaalayo farsamooyinka qallafsan ee loo yaqaan 'cryptography techniques', tusaale ahaan Feistel Networks, DES, iyo AES, iyo kuwo kale.
Ogolaanshuhu wuxuu baran doonaa amniga aasaasiga ah ee macluumaadka sida uu u khuseeyo cryptography
Understudies waxay ogaan doontaa farsamooyinka qashinka oo ay ku jiraan MD5, MD6, SHA, Gost, RIPMD 256 iyo kuwo kale
Farsamada sawirrada, tusaale, RSA, Elgamal, Elliptic Curve, iyo DSA
10 Koorsooyinka Tababarka Microsoft waxay bedeli doonaan qaabka aad u maleyneyso